Q3 2078/79(Q3 2078/79) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
तेस्रो त्रैमाससम्म बरुण हाइड्रोपावरको कस्तो छ वित्तीय अवस्था ?
काठमाण्डौ । बरुण हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले समीक्षा अवधिमा २ करोड १४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। जुन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३०५.९२ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले ५२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ...
राधी विद्युत कम्पनीको नाफामा २४.७८%को गिरावट, अन्य सूचक कस्ता ?
काठमाण्डौ । राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले समीक्षा अवधिमा ४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। जुन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २४.७८ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले ६ करोड २६ लाख रुपैयाँ नाफा...
काठमाण्डौ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीले १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ। जुन गत वर्षको सोही अवधिसम्मको तुलनामा ४.४८ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीले १ करोड ८ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन...
अप्पर तामाकोशीको घाटा झनै बढ्यो, कारण यस्तो छ
काठमाण्डौ । अप्पर तामाकोशी हाइड्रोपावरले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा पनि कम्पनीले ३५ करोड २८ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको थियो। कम्पनीको सञ्चालन मुनाफा १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ...
हकप्रद जारी गर्ने स्वीकृति पाएको ङादी ग्रुप पावरको नाफामा उछाल, ईपीएस कति ?
काठमाण्डौ । हकप्रद निष्कासनको स्वीकृति पाएको ङादी ग्रुप पावरले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ९३.८९ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले २ करोड ८० लाख...
मैलुङ खोला जलविद्युतको नाफामा ५३.१८%को गिरावट, विद्युत बिक्रीको आम्दानी पनि घट्यो
काठमाण्डौ । मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीले १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ५३.१८ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीले २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ नाफा...
एसियन लाइफ : बीमाशुल्क आर्जन ११.४१%ले बढ्यो, नाफामा रु. १८.४० करोड
काठमाण्डौ । एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ। यो रकम गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११.४१ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीले ४ अर्ब ५९...
सीआईटीको नाफा रु. ६१.६६ करोड, जगेडामा ५३.०७%को बढोत्तरी
काठमाण्डौ । नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) ले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षा अवधिमा सीआईटीले ६१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। जुन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ४.१४ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा सीआईटीले ५९ करोड २० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। सीआईटीको...
काठमाण्डौ । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीले १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ। जुन गत वर्षको सोही अवधिसम्मको तुलनामा ३३.९२ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीले १ करोड ८ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन...
तेस्रो त्रैमासमा सिंगटी हाइड्रोको वित्तीय प्रदर्शन कस्तो ?
काठमाण्डौ। सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले समीक्षा अवधिमा ५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहारेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले १ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। यो अवधिमा कम्पनीको विद्युत बिक्रीको आम्दानी...
काठमाण्डौ । नेको इन्सुरेन्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीले १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ। जुन गत वर्षको सोही अवधिसम्मको तुलनामा १.१७ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीले १ करोड ३६ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेको...
काठमाण्डौ। सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीले १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ। जुन गत वर्षको सोही अवधिसम्मको तुलनामा २०.३० प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीले १ करोड ४४ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन...
युनाइटेड इदी मर्दीको नाफामा उछाल, ईपीएस कति?
काठमाण्डौ । युनाइटेड इदी मर्दी एन्ड आरबी हाइड्रोपावर लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले समीक्षा अवधिमा ५ करोड २७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। यो नाफा गत वर्षको तुलनामा...